Soo dejisan Chromecast 1.14.11 – Vessoft
Chromecast – software ah in ay baahin qoraallo nuxur ka on TV ah la-HDMI dekedda. Chromecast waxay leedahay qalab qaabeynta in lagu xiro qalabka ay u Wi-Fi oo ay markii dambe sii daayey. Software The kuu ogolaanayaa inaad baahiyey video, music ama kulan on TV ka computer smartphone iyo looxa. Chromecast awood u dhigay in screensaver u dhexeeya warbaahinta, beddel sirta ah iyo qalab Wi-Fi magaca. Sidoo kale software awood u baahinta sawirrada computer ka dhex browser Chrome ah. Chromecast ayaa interface fudud oo dareen leh.
Warbaahinta ka kooban ka soo hindiseen in TV-ga
Isticmaalka Wi-Fi baahinta
Customization qalabka Chromecast
Soo dejisan Chromecast
Faallo ku saabsan Chromecast
Chromecast Xirfadaha la xiriira